Waalidiinta Caruurtoodu ku maqan tahay Eritrea oo Dacwad Culus u qortay Xeer ilaaliyaha Guud (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Waalidiinta Caruurtoodu ku maqan tahay Eritrea oo Dacwad Culus u qortay Xeer ilaaliyaha Guud (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waalidiinta Caruurta ku maqan dalka Eritrea ayaa qoraal cabasho ah u qortay xeer ilaaliyaah guud ee Qaranka, iyagoo ka codsaday inuu furo baaritaan ku saabsan Caruurtooda sida sharci darrada ah tababarka loogu qaaday dalka Eritrea.
Qoraalka oo ay ku saxiixnaayeen 12 ka mida waalidiinta Askarta ku maqan Eritrea ayaa ku socday xeer ilaaliyaha guud , waxaana la ogeysiiyey Ra’iisal Wasaaraha, Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka, xildhibaannada, Dowlad Goboleedada iyo ururadda Bulshada, waxayna codsadeen baarista kiiskan iyo in sharciga la hor keeno ciddii ku lug yeelata.
Previous articleRooble oo Amar kusoo rogay xubnaha cusub ee Dowlad Goboleedyada u soo magacaabeen Guddiyada Doorashada
Next articleXubnihii Guddiga Doorashada ee ay soo magacaabeen Cali Guudlaawe iyo Lafta-gareen oo la baarayo